Inhloso - abalandeli bakho nabalandeli ezinkundleni zokuxhumana bayakulandela ngoba bacwaninga ukuthenga kwabo okulandelayo futhi babheka inkampani yakho? Ukuqagela kwami ​​ukuthi lelo iphesenti elincane lezithameli zakho zizonke… futhi kumnandi ukuzama ukuthola ukuthi zingobani ngqo.
Imisebenzi - Bonke abathengisi bathanda ukudweba ifaneli yakho yokuguqula futhi bazokutshela ukuthi ukuzibandakanya kubalulekile phakathi kokuqwashisa nokuguqulwa. Inkinga akuyona i-oda; yisikhala esiphakathi. Amakhasimende abona ngeso lengqondo lo fanela opholile lapho amathemba eqa khona isinyathelo sokugcina siye kwesilandelayo. Iqiniso lihluke kakhulu. Ukuguqulwa kungamakhilomitha amaningi ukusuka ekuxhumaneni nemithombo yezokuxhumana. Kungathatha iminyaka ukushayela igunya ekhaya onalo kufanele liqashelwe. Leyo yimizamo eminingi ngokubuyisa okuncane kakhulu ekutshalweni kwezimali.
Uyize - akuzizwa kumangalisa yini uma uthola amakhulu noma izinkulungwane zokubukwa, ukuthandwa, ama-tweets, ama-retweets, amasheya noma ukungena komncintiswano? Kuyakwenza - ithimba lethu likwenzile futhi likulungele kakhulu ekusebenzeni kwethu kwezokuxhumana. Inkinga, vele, bekungukuthi ayikho kulawo ma-metric aholele kunoma yiliphi ibhizinisi. Lapho ifoni ingakhali, abathengisi bathanda ukukhomba kumamethrikhi okuyize ukuze baphambukise ukunakwa.
Angisho ukuthi imithombo yezokuxhumana ngeke isebenze noma ngeke isebenze, ngimane ngiphawula ukuthi ngivame ukubona ukutshalwa kwezimali kwamanye amasu anembuyiselo ephakeme kakhulu kutshalomali, adinga umzamo omncane kakhulu, futhi kulula ukulandela umkhondo.
Ukuqagela kwami ​​ukuthi akukhona ngokusebenzisa ezokuxhum.